September 2020 - Shop
Shop > All Articles > 2020 > September
အိမ်မှာနေရင်းကိုယ်တိုင်ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်မည့်ပစ္စည်းများနဲ့နည်းလမ်းကောင်းများ0523
The KaungHtet September 30, 2020 10:12 am October 5, 2020
Apple MacBook မဝယ်ခင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ01333
Apple ရဲ့ MacBook ၁ လုံးဝယ်တော့မယ်ဆို ဘယ်အချက်တွေ သိထားဖို့လိုလည်း? MacBook တွေဟာ ပုံမှန်လက်ပ်တော့တွေထက် Function ပေါင်းများစွာပါရှိပြီးတော့ Android တွေနဲ့လဲစျေးနှုန်းကွာဟပါတယ်။ ပြီးတော့ MacBook တွေဟာ သူ့ Series အလိုက် …
ဖုန်းဂိမ်းတွေဆော့တဲ့ အခါ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ဆော့နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ထားသင့်လဲ?0401
ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေလက်ချွေးထွက်တာ Key တွေလွတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် First Person/ Third Person ဂိမ်းတွေမှာဆိုရင် ခြေသံတွေကို နားထောင်ရတာ ဘယ်နဲ့ညာ တိတိကျကျသိဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် နားကြပ်ကောင်းကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး …
နံရံကပ်ပန်ကာတွေအကြောင်းသင်လေ့လာဖူးလား?0587
အိမ်မှာနေရင်း Homemade ကိတ်မုန့်လေးတွေလုပ်စားကြမယ်0809
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း နဲ့ ဆံသားကြမ်းခြင်းတွေကိုသက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ0752
သင်ဟာ အိပ်စက်ခြင်းကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်လား?02190
Iphone နဲ့ Android Phone တွေ ရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?0601
Gaming Console တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်များများသိလဲ?02154